मेलापातमा पनि चुनावकै चर्चा: |
मेलापातमा पनि चुनावकै चर्चा:
प्रकाशित मिति :2017-03-29 05:25:25
बझाङ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेसंगै चोकदेखि चिया पसल, कार्यालयदेखि भट्टी पसलसम्म चुनावको बहस सुरु हुन थालेको छ । चुलाचौकामा मात्र सीमित हुने महिलाहरू समेत अहिले चुनावकै बारे कुराकानी गर्न थालेका छन् । कुन पार्टीले जित्ल ? कुन पार्टीलाई समर्थन गर्ने? वडा अध्यक्ष, मेयर कस्लाई बनाउने? भन्ने वैचारिक मतभेदसगै विगतमा कुन पार्टीले के योगदान गरे त्यसको समिक्षा र अब कस्तो नेतृत्व छान्ने भन्ने चर्चा छ ।